Maitiro Ekuti Ugovane Nezvako Yako WordPress Zvinyorwa kuLinkedIn Uchishandisa Zapier | Martech Zone
Maitiro Ekuti Ugovane Nezvako Yako WordPress Zvinyorwa kuLinkedIn Uchishandisa Zapier
Chimwe chezvinhu zvangu zvandinoda zvekuyera uye kutsikisa yangu RSS feed kana yangu podcast kune zvemagariro media iri Feedpress. Nehurombo, chikuva hachina LinkedIn kusangana, zvakadaro. Ndakatambanudza ruoko kuti ndione kana vaizoiwedzera uye ivo vakapa imwe mhinduro - kutsikisa kuLinkedIn kuburikidza Zapier.
Zapier WordPress Plugin kuLinkedIn
Zapier ndeye mahara kune mashoma ekubatanidzwa uye nezana zviitiko, saka ini ndinogona kushandisa iyi mhinduro ndisina kushandisa chero mari pazviri… kunyangwe zvirinani! Heano maitiro ekutanga:
Wedzera Anoshandisa WordPress - Ini ndaikurudzira kuwedzera mushandisi kuWordPress yeZapier uye kumisikidza chaiyo password. Nenzira iyi, haufanire kunetseka nezvekuchinja password yako wega.
Isa iyo Zapier WordPress Plugin - The Zapier WordPress plugin inokutendera iwe kusanganisa yako WordPress zvemukati kune matani emabasa akasiyana. Wedzera zita rekushandisa uye password yawakaisira Zapier.
Wedzera iyo WordPress kuLinkedIn Zap - The Zapier Yakabatanidzwa peji rine zvakati wandei zvekubatanidzwa zvakatonyorwa… imwe yacho iri WordPress kuLinkedin.
Zapier WordPress kune LinkedIn Template
Pinda mu LinkedIn - iwe unozobvunzwa kuti upinde muLinkedIn uye upe mvumo yekubatanidzwa. Kana ukangoita, iyo Zap yakabatana.
Batidza Zap yako - Bvumira Zap yako uye nguva inotevera paunoburitsa chinyorwa paWordPress, chichagovaniswa paLinkedin! Iwe zvino uchaona iyo Zap inoshanda muZapier Dashibhodhi yako.
Uye ipapo iwe enda! Zvino, kana iwe ukashambadza yako posvo paWordPress, ichangoerekana yaburitswa kuLinkedIn.
Ah… uye izvozvi zvandiri kutsikisa ipapo, pamwe ungade kunditevera pane LinkedIn!
tevera Douglas Karr pane LinkedIn
Tags: fudza kune linkinLinkedInlinkedin kutsikisashambadza wordpress kune linkedinrss kuinongedinpasocial media kutsikisaWordPressWordpress pluginWordpress kune yakabatanidzwaWordpress kune yakasanganiswa zapzapperzapier Wordpress plugin